किन तपाईं मात्र प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्न Amazon.com | Martech Zone
किन तपाईं केवल Amazon.com प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्न
शुक्रबार, अप्रिल 2, 2010 शनिबार, जून १,, २०१। ट्रेविस स्मिथ
ट्युटिभ टोली अझै पनि यस बर्ष पछि बसोबास गर्न कोशिस गर्दै छ दक्षिण द्वारा दक्षिण पश्चिम अन्तर्क्रियात्मक (SXSWi) मार्चमा सम्मेलन। हामी सबैले धेरै राम्रो समय पाएका थियौं र अन्तर्क्रियात्मक समुदाय र के हुँदैछ भन्ने बारे धेरै सिक्यौं। त्यहाँ जीमेल टीमको साथ प्यानलबाट धेरै रोचक सत्रहरू थिए
नेर्ड्सका लागि खाना पकाउँदै, धेरै जसो अनलाइन पपिंग गर्दै छन्। म तपाइँसँग मेरो मनपर्नेहरू मध्ये एक साझा गर्न चाहान्छु।
जारेड स्पूल द्वारा अमेजनबाट डिजाइन कोषहरू प्रकट गर्दै
जेरेड स्पूल प्रयोगकर्ता अनुभव दुनिया मा एक नेता हो, विशेष गरी परिमाणात्मक अनुसंधान अन्तरिक्ष मा। ऊसँग काम गरिरहेको छ Amazon.com धेरै वर्षको लागि, तिनीहरूको यातायात बान्कीहरूको विश्लेषण र अमेजन शपर्सको प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्ने प्रयास गर्दै। उनको कुराकानीका दुई प्रमुख बुँदाहरू थिए।
उनले रमाईलो कुरा औंल्याए जुन अमेजनले नयाँ सुविधाहरूका साथ गर्छ र प्रयोगकर्ताको अनुभव सुधार गर्न लगातार साना परिवर्तनहरू लागू गर्दछ।
उनले छलफल गरे कि तपाईं अमेजन जस्तो काम गर्न सक्नुहुन्न र सफल हुनको लागि आशा गर्नुहुन्छ।
हामी सबै किन अमेजनलाई मात्र नक्कल गर्न सक्छौं? एक शब्दमा "ट्राफिक"
२०० Amazon को डिसेम्बरदेखि अमेजनमा ,१,71,431,000१,००० आगन्तुक छन्। उनीहरूले सुरू गरेदेखि 2008 76,000,000,००,००० ग्राहकहरूको सेवा गरेका छन्। प्रत्येक सेकेन्डमा २ 24 अर्डर राखिन्छ। के तपाईंको वेबसाईटमा त्यस्ता ट्राफिक नम्बरहरू छन्?
मेरो या त।
सबै भन्दा राम्रो उदाहरण Jared प्रयोग प्रयोगकर्ता उत्पन्न समीक्षा हो। धेरै व्यक्ति समीक्षा अनलाइन खरीद गर्दा धेरै मद्दत प्राप्त गर्न, र अमेजन मा प्रयोगकर्ता समीक्षा उच्च सम्मान गरिएको छ। त्यसोभए तपाईं किन आफ्नो साइट मा प्रयोगकर्ता समीक्षा थप्न सक्नुहुन्न? जारेडले अनुसन्धानलाई देखाउँदछ कि एक उत्पादको बारेमा २० भन्दा कम समीक्षा भएको देखाउँदा वास्तवमा व्यक्तिले निर्णय लिन मद्दत गर्दैन कि उत्पादन उनीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर। केही केसहरूमा यसले वस्तुको सकारात्मक धारणालाई कम गर्दछ।
उहाँ साझेदारी गर्न जारी राख्नुहुन्छ कि १, purchase०० खरिदकर्ताहरू मध्ये १ मात्र वास्तवमा समीक्षा लेख्छन्। कति कति अनलाइन समीक्षा तपाईले लेख्नु भएकोको बारेमा सोच्नुहोस् कति कति तपाईंले पढ्नु भएको छ। त्यसोभए ती २० समीक्षा प्राप्त गर्न आइटमको बिक्रीमा मद्दत गर्न तपाईंसँग १.1 मिलियन मानिस आइटम खरीद गर्न आवश्यक छ। ओहो।
म तपाईंलाई हेर्न प्रोत्साहन गर्दछु जारेडको प्रस्तुतीकरण (तल हेर)। ऊ धेरै चलाख र सुन्न सजिलो छ।
म तपाइँ पनी यो सुनिश्चित गर्न हौसला दिन्छ कि तपाइँ सधैं आफ्नो अनलाइन उत्पादनहरु लाई सुधार गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाइँको विशेष साइटको लागि सबैभन्दा अर्थ राख्छ। प्रत्येक साइट फरक छ, यसको बिभिन्न प्रयोगकर्ताहरू छन् र ती प्रयोगकर्ताहरूको बिभिन्न आवश्यकताहरू छन्। सफलता को लागी अनलाइन जादू बुलेट सुविधा छैन। तपाईको सफलता सुनिश्चित गर्ने एक मात्र तरीका भनेको तपाईका प्रयोगकर्ताहरुलाई सुन्नुहुन्छ, र तिनीहरुका कार्यहरु पूरा गर्न आवश्यक उपकरणहरुमा निरन्तर सुधार गर्नु।
नयाँ मिडिया घोषणापत्र